Edge andry welding - China Langzhi Welding Fitaovana
- Overview Edge-andry mandeha ho azy welding rafitra no be mpampiasa amin'ny longitudinal seam sy boribory seam welding .Our welding milina dia afaka mahatsapa longitudinal seam welding misaraka. Boribory seam welding tsy ampy, raha ampiasaina amin'ny fihodinana welding-roller. Perfect fampisehoana in vy, Stainless, titane welding. Mandany TIG izahay ary plasma welder, ranon-dra toy ny tena ratsy, TIG (fahana tariby) toy ny fonony lafiny .One-welding, lafiny roa-koronosy. Arc anaty rano toy ny fonony koa hamolavola araka ny welding teknolojia ...
Edge-andry mandeha ho azy welding rafitra no be mpampiasa amin'ny longitudinal seam sy boribory seam welding .Our welding milina dia afaka mahatsapa longitudinal seam welding misaraka. Boribory seam welding tsy ampy, raha ampiasaina amin'ny fihodinana welding-roller. Perfect fampisehoana in vy, Stainless, titane welding.
Mandany TIG izahay ary plasma welder, ranon-dra toy ny tena ratsy, TIG (fahana tariby) toy ny fonony lafiny .One-welding, lafiny roa-koronosy. Arc anaty rano toy ny fonony koa hamolavola araka ny welding teknolojia takina.
Anjara: welding tsara toetra, tsara tarehy, kijanona toetra, kely deformation, tsy hipetrapetra-poana faritra sy mety workpiece convery.
welding halavan'ny isan-karazany 6000-12000mm
welding savaivony isan-karazany 219-3000mm
welding haingana isan-karazany 0-2000mm / min
welding hateviny isan-karazany 3-30mm (ambany 10mm, no beveling)
Previous: Gantry welding rafitra
H-Tara FABRICATION Welding Fitaovana